ထိပ်တန်း ၆ ခု၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ （အပြည့်စုံဆုံး of
ပင်မစာမျက်နှာ > Resveratrol ဖြည့်စွက်
သင်ဝယ်ရန်နေရာရှာနေလျှင် Resveratrol အမှုန့် အမြောက်အများအနေဖြင့်ကုန်ကြမ်းများရှာဖွေခြင်းအတွက်သင်မျက်စိကန်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Cofttek ဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသည့်သုတေသနအဖွဲ့နှင့်အထူးအရောင်းဌာနမှကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်တိုအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းတွင်ဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်များရှိသည်။ ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော resveratrol သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်ကြီးမားသောသုတ်ဆေးများဖြင့်ရရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှရရှိသည်။ ၎င်းမှထုတ်လုပ်သောဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကိုအရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သငျသညျအမြောက်အများအတွက် resveratrol ဝယ်ချင်လျှင်, စျေးဝယ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည် cofttek.com.
ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့် Resveratrol လိုအပ်?
မြေပဲထောပတ် resveratrol ရှိပါသလား
ဘယ်ဝိုင် resveratrol အမြင့်ဆုံးပမာဏရှိသနည်း
resveratrol testosterone ဟော်မုန်းတိုးစေသလား
Resveratrol မှာ testosterone ဟော်မုန်းနည်းစေသလား။
သင်၏မျက်နှာအတွက် Resveratrol ဘာလုပ်သနည်း။
နေ့စဉ် resveratrol ဘယ်လောက်ယူလို့ရပါသလဲ။
သင်၏မျက်နှာသို့ resveratrol ကိုသင်ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
ဘယ်အစားအစာတွေမှာမြင့်မားတဲ့ resveratrol ပါလဲ?
သိုင်းရွိုက်ပြproblemနာနဲ့ resveratrol ယူလို့ရမလား။
ပန်းသီးမှာ resveratrol ရှိပါသလား
Resveratrol (၅၀၁-၃၆-၀) အပင်များစွာတွင်တွေ့ရသော်လည်းများသောအားဖြင့်စပျစ်သီးတွင်တွေ့ရသော polyphenolic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Resveratrol သည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် stilbene ဟုမကြာခဏဆိုကြပြီး၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံး stilbene ဖြစ်သည်။ Stilbenes များသည်အခြားအပင်များတွင်အနည်းငယ်သာတည်ရှိနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းစပျစ်ပင်မိသားစုတွင်အများဆုံးတွေ့ရလေ့ရှိသောအပင်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ စပျစ်သီးအတွင်းတွင် resveratrol သည်အရေပြားတွင်ရှိပြီး phytoalexin (သို့) အပင်အဆိပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ စပျစ်သီးများကိုရောဂါအမျိုးမျိုးမှကာကွယ်ပေးသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနပညာရှင်များသည်ပြင်သစ်လူမျိုးတို့၏ပြည့်နှက်နေသောအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာများစားသုံးခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနှင့်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့သည်။ လူအများစုက resveratrol သည်ဤ 'French Paradox' နှလုံးရောဂါ၏အဖြေဖြစ်သည်ဟုထင်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်အနီရောင်ဝိုင်သည်ဤ 'ပြင်သစ် Paradox' ကိုဖွင့်ရာတွင်အနည်းငယ်သောအခန်းကဏ္ small မှပါဝင်သည်။ အစားအစာနှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အညီအမျှအရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်ကြသည်။
၀ ိုင်နီစားသုံးခြင်းကိုနှစ်သက်သောနိုင်ငံများတွင်လူ ဦး ရေသည်နေ့စဉ် ၀.၂ မီလီဂရမ်အထိ resveratrol ကိုသောက်သုံးနေသည်။ သို့သော်စပိန်နှင့်မြောက်အမေရိကကဲ့သို့စပျစ်ဝိုင်နီကိုမနှစ်သက်သောနိုင်ငံများစွာတွင်လူ ဦး ရေသည် resveratrol မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထုတ်လုပ်သူများသည်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုတစ်ချိန်ကကတိပေးထားသည့် resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။
မေးခွန်းကတော့ resveratrol သည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးများကဖော်ပြသကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလား။ resveratrol ၏အချို့အသုံးပြုမှုကိုကြည့်ကြစို့။
ဝိုင်နီသည်လက်စထရောကိုလျော့နည်းစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသတိထားမိသည့်အချက်တစ်ချက် သို့သော်ဤပစ္စည်းကိုမည်သည့်အနီရောင်စပျစ်ဝိုင်ကိုမဆိုပေးသောစက်ရုံဒြပ်ပေါင်းသည် resveratrol ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိကြပါ။ ဝိုင်နီနှင့်အတူ resveratrol ကိုအခြားအစားအစာများစွာတွင်တွေ့ရသည်။ Resveratrol (501-36-0) ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အထီးကျန်ခဲ့ပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ဤဒြပ်ပေါင်းနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနပြုချက်က၎င်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၊ ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချခြင်းအပြင်, resveratrol ကိုလည်းသိမြင်မှု function ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သွေးဖိအားကိုထိန်းညှိလူသိများသည်။
resveratrol နှင့်ပတ်သက်သောဤအသေးစိတ်ကျသောဆောင်းပါးတွင်၎င်းသည်၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ အသုံးပြုမှုနှင့်လုံခြုံသောသောက်သုံးမှုများကိုဆွေးနွေးတင်ပြပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံး resveratrol ဖြည့်စွက်ချက်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်အပင်ကို ၀ ယ်ယူရမည်ကိုအကြံပေးသည်။ သို့သော်အခြေခံအားဖြင့်စကြစို့။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ resveratrol ပမာဏမြင့်မားစွာသောက်ခြင်းကသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာသည့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကိုလူတစ် ဦး ၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အနေဖြင့်ယူဆသည်။ Resveratrol သည်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းကသွေးကြောများကိုဖြေလျော့စေသည်။ resveratrol သည်သွေးပေါင်ချိန်ကိုလျှော့ချရန်အထောက်အထားအလုံအလောက်ရှိသော်လည်းမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောဆေးနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနများပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ (၁) Sonia L. Ramírez-Garza၊
နှစ်များတစ်လျှောက်လေ့လာခဲ့သောလေ့လာချက်များအရအနီရောင်ဝိုင်ပုံမှန်စားသုံးမှုသည်အသက်အရွယ်အားဖြင့်သိသာသောကျဆင်းမှုကိုသိသိသာသာနှေးကွေးစေသည်။ ဤသည်အဓိကအားကြောင့်အနီရောင်ဝိုင်ထဲမှာ resveratrol ပစ္စုပ္ပန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Resveratrol သည်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် anti-oxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီး beta-amyloids များအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ Alzheimer စတင်ဖြစ်ပေါ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
③ Resveratrol သည်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း၊ resveratrol ၏ဆီးချိုရောဂါအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်များတွင် resveratrol သည်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်မှုအားတိုးစေပြီးဂလူးကို့စ်ကို sorbitol အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသည့်အင်ဇိုင်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေသည်။ Sorbitol သည်သကြားဓာတ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆီးချိုရောဂါရှိသူများကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များက resveratrol သည် AMPK ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်၊ ၎င်းသည်ဂလူးကို့စ်ကိုဇီဝြဖစ်ပျက်စေသောပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသကြားဓာတ်ပမာဏလျော့ကျစေသည်။
သုတေသနပြုချက်အရ resveratrol သည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏မျိုးရိုးဗီဇကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကင်ဆာဆဲလ်များကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ resveratrol သည်ဟော်မုန်းအပေါ်မူတည်ပြီးကင်ဆာများပြန့်ပွားမှုကိုဟော်မုန်းများထုတ်ဖော်ပြသမှုကိုတားဆီးပေးသည်။
အလားတူစွာသက်တမ်းတိုးမြှင့်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် resveratrol ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများစွာတွင် resveratrol သည်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်သိထားသည့်မျိုးဗီဇအချို့ကိုသက်ဝင်စေခြင်းအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောတိရိစ္ဆာန်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အလားတူရလာဒ်များကိုလူသားများမျှော်လင့်ကြသည်။ သို့သော်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။
Resveratrol သည်အဆစ်နှင့်အဆစ်နာခြင်းများကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်သည့်ဆေးဖြစ်သည်။ ဤအပင်အခြေပြုဒြပ်ပေါင်းသည်အရိုးနုပျက်စီးခြင်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားအဆစ်များနှင့်အဆစ်များနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ အချို့သောတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ resveratrol သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အဆစ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Resveratrol သည်နှလုံးကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ကိုလက်စထရောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသီးခြားအင်ဇိုင်းတစ်ခု၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်နှလုံးရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ resveratrol သည် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသောကြောင့်၎င်းသည်သွေးလွှတ်ကြောနံရံများတွင်ပြားတည်ဆောက်မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိသည့် LDL cholesterol ၏ဓာတ်တိုးခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။
၎င်းသည်ဓာတု၊ ကိုလက်စထရောနှင့်အရက်ဒဏ်ရာများမှအသည်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ Resveratrol သည်ဂလူးကို့စ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့် lipid ပရိုဖိုင်းကိုတိုးတက်စေပြီးအသည်း fibrosis နှင့် steatosis ကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Hepatic cell fatty acid ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။
သင့်တွင်အဆီအသည်းရှိပါကရှောင်ရန်အစားအစာ ၆ ခု
သကြားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သကြားလုံး၊ ကွတ်ကီး၊ ဆိုဒါနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်များကဲ့သို့သောသကြားဓါတ်များမှရှောင်ပါ။
Resveratrol သည်ဆီးချို nephropathy၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသွေးဆောင်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဒဏ်ရာ၊ aldosterone သွေးဆောင်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဒဏ်ရာ၊ ischemia-reperfusion ဒဏ်ရာ၊ sepsis-induced ကျောက်ကပ်ဒဏ်ရာနှင့်ပိတ်ဆို့ခံရသောကျောက်ကပ်အပါအဝင်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာဒဏ်ရာများကိုကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
မြေပဲထောပတ် - မြေပဲထောပတ်သည်ပန်းသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုဆေးကြောရာတွင်အလွန်ကောင်းသော်လည်း resveratrol (ခွက်တစ်ခွက်လျှင် ၁၃ မီလီဂရမ်အထိ) ပါဝင်သည်။ မြေပဲထောပတ်သည် niacin နှင့်မန်းဂနိစ်များစွာရရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိ meta-analysis သည် resveratrol စားသုံးမှုသည်အလေးချိန်၊ BMI, WC နှင့်အဆီအလေးချိန်ကိုသိသိသာသာလျော့ချစေပြီးပိန်သောဒြပ်ထုကိုတိုးမြှင့်ပေးကြောင်း၊ သို့သော် leptin နှင့် adiponectin အဆင့်ကိုမထိခိုက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Resveratrol သည်အသားအရေကိုအလွယ်တကူထိုးဖောက်နိုင်ပြီးအရေပြားအိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတက်ကြွစွာနှေးကွေးစေသည်။ Resveratrol သည်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပိုးမွှားနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ဓါတ်တိုးစေသည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်းကြောင့်အသားအရေကိုကျန်းမာစေပြီးအစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများမှကင်းဝေးစေပါသည်။
Resveratrol သည်စပျစ်သီးမှအနီရောင်နှင့်စပျစ်သီးမှပြုလုပ်သောအနီရောင်ဝိုင်နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ Malbec၊ Petite Sirah၊ St. Laurent နှင့် Pinot Noir စသည့်ဝိုင်များသည်အမြင့်ဆုံး resveratrol ပါဝင်သည်။
Resveratrol သည် ကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက်ကို အတုယူကာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့် အင်ဆူလင်အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် adipogenesis ကို ဟန့်တားခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချခြင်းနှင့် adipose တစ်ရှူးများတွင် lipid လှုပ်ရှားမှုကို တိုးမြှင့်စေသည်။
Resveratrol သည်အထူးသဖြင့် oxidative stress ၏ကြိမ်များအတွင်း၌ antioxidant molecules ၏ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်နိုင်သည့်ပရိုတင်းဓာတ်တိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့်၊
သငျသညျပြီးသား resveratrol ၏မျှတသောပမာဏကိုလောင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုမြေပဲ၊ pistachios၊ စပျစ်သီး၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဝိုင်၊ blueberries၊ cranberries နှင့်ကိုကိုးနှင့်ချောကလက်စသည့်အစားအစာများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤအစားအစာများမှထွက်လာသည့်အပင်များသည်မှိုကူးစက်မှု၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဒဏ်ရာတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရန် resveratrol ကိုထုတ်လုပ်သည်။
Quercetin သည်ပန်းသီး၊ ပျားရည်၊ Raspberry၊ ကြက်သွန်နီ၊ စပျစ်သီးနီ၊ ချယ်ရီသီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်သစ်သီးများတွင် quercetin ပါဝင်မှုသည်ကြက်သွန်နီတွင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ မီးသီးအရောင်နှင့်အမျိုးအစားသည်ကြက်သွန်နီတွင် quercetin ပါဝင်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သုတေသီများက resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးကိုရရှိသောအမျိုးသမီးများအကြားစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းသည် ၂၃.၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် testbo ဟော်မုန်းပမာဏသည် ၂.၉ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသည်။
သင်၏နေ့စဉ်အစားအစာနှင့်အတူစပျစ်သီးပျဉ်ကိုကျန်းမာစွာစားသုံးခြင်းကသင့်အားသံချို့တဲ့ခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သည်။ ဤခြောက်သွေ့သောစပျစ်သီးများသည်အလွန်နည်းပါးပြီးသဘာဝချိုမြိန်သည်။ သူတို့သည်သေးငယ်သောအမျှင်များဖြစ်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်သောအမှုန်များဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုကြာရှည်စွာခံစားနိုင်အောင်ကူညီပေးသည်။
နေ့စဉ်သုံးလအထိ 1500 မီလီဂရမ်ထိထိုးသွင်းပါက resveratrol သည်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ နေ့စဉ် ၂၀၀၀-၃၀၀၀ မီလီဂရမ်ထိမြင့်သောဆေးများကို ၂-၆ လအထိဘေးကင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ resveratrol ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများသည်အစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
Resveratrol သည်အငွေ့ပြန်စေသောအန်ဒရိုဂျင်အဆင့်ကိုလျော့ချပေးသော်လည်း testosterone ဟော်မုန်း၊ dihydrotestosterone၊ PSA အဆင့်များနှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာပမာဏအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
အချို့သောသုတေသနများအရ resveratrol သည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်သောရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်သွေးခဲခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နိူင်သည်။ သို့သော်အခြားလေ့လာမှုများကနှလုံးရောဂါကိုတားဆီးရာတွင် resveratrol မှအကျိုးကျေးဇူးများမရရှိခဲ့ပါ။
လိမ်းဆေးတွင်၊ resveratrol သည် အရေပြား၏မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ နှောက်ယှက်ပြီး မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှုကို ချေဖျက်ပေးပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောအသားအရေကို တောက်ပစေသည်။ အရေပြားနီမြန်းခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်သော သိသာထင်ရှားသော အသားအရေကို တည်ငြိမ်စေသော ဂုဏ်သတ္တိလည်း ရှိပါသည်။
သင့်လျော်သော resveratrol သောက်သုံးသောသည်ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်သည့်လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်ဖြည့်စွက် aromatase တားစီးဘို့သတ်မှတ်ထားသောအခါ, အကွာအဝေးများသောအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 250 မီလီဂရမ်န်းကျင်ထားရှိစဉ် 500-500 မီလီဂရမ်အတွင်း resveratrol စားသုံးရန်တစ် ဦး ချင်းစီလိုအပ်သည်။
နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်အသက်ရှည်စေရန်အတွက် resveratrol ကိုသောက်သုံးသောကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့သောက်သုံးသောပမာဏကို ၁၅၀-၄၄၅ မီလီဂရမ်အကြားဆက်ထိန်းထားရန်အကြံပြုသည်။ သို့သော်မည်သည့်ရောဂါမဆိုခံစားနေရသူများကိုတစ်နေ့လျှင် ၅-၁၀ မီလီဂရမ်တွင်ဆေးကိုအနိမ့်ဆုံးထားရန်အကြံပြုသည်။ သင်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမဆိုခံစားနေရပါကဆေးဝါးများမစခင်သင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် ၁% resveratrol ကိုအရေပြားတွင်လိမ်းပေးသောအခါခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့်သွေးဆောင်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ resveratrol analog များ, RTA နှင့် RTG, ကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးပြင်းအား (1% RTA, 04% RTA နှင့် 0.8% RTG) မှာလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်လူ့အရေပြားအလင်းသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။
အစိမ်းရောင်ကသွေးရည်ကြည်တွေအကြောင်းပြောတယ်၊ ဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာလိမ်းပါ၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုလုပ်တဲ့အခါ toner ကိုသုံးရင်အဲဒီခြေလှမ်းပြီးရင်အသုံးချပါ။ အကယ်၍ သင်သည် resveratrol ကို moisturizer တွင်အသုံးပြုပါကနေ့စဉ် ၂ ကြိမ်၊ နံနက်ခင်းနှင့်ညနေခင်းသန့်စင်ခြင်း၊
UCLA မှလေ့လာမှုအသစ်အရစပျစ်သီးနှင့်ဝိုင်နီတွင်တွေ့ရသော resveratrol ဟုခေါ်သည့် antioxidant သည်ဆိုးရွားသည့်ပြိုကွဲမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သုတေသီများသည် ၀ က်ခြံဖြစ်စေသောဘက်တီးရီးယားတစ်မျိုးကို antioxidant resveratrol ကိုအသုံးပြုသောအခါဝက်ခြံထွက်သော bug များ၏ကြီးထွားမှုကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတားဆီးပေးခဲ့သည်။
CoQ10 မှဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာရှားပါးပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်းနှင့်ပူလောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အန္တရာယ်များ။ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းပြproblemsနာများ၊ ဆီးချိုစသည့်နာတာရှည်ရောဂါများရှိသူများသည်ဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုရန်သတိထားသင့်သည်။
၎င်းကိုမြေပဲ၊ pistachios၊ စပျစ်သီး၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဝိုင်၊ blueberries၊ cranberries နှင့်ကိုကိုးနှင့်ချောကလက်စသည့်အစားအစာများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤအစားအစာများမှထွက်လာသည့်အပင်များသည်မှိုကူးစက်မှု၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဒဏ်ရာတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရန် resveratrol ကိုထုတ်လုပ်သည်။
အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့်ဗီတာမင်များ (A, D, E နှင့် K) သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲ၌များများစုဆောင်းရန်ပိုများပါသည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်ကျောက်ကပ်ဆရာဝန်ကပြဌာန်းထားခြင်းမရှိပါကယင်းတို့ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ နေ့စဉ်ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်ဗီတာမင်အေသည်အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။
ခံတွင်းမှတစ်ဆင့်နေ့စဉ်မီလီဂရမ် ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သော Resveratrol ကိုလုံခြုံသည်ဟုမှတ်ယူသည်။ စားသုံးမှုကြာချိန်သည် ၃ လထက်မပိုစေသင့်ပါ။ နေ့စဉ် ၂၀၀၀-၃၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိမြင့်မားသောဆေးများကိုသောက်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောပြissuesနာများဖြစ်စေသည်။
ကိုယ် ၀ န်နှင့်နို့တိုက်နေသည့်အမျိုးသမီးများသည် resveratrol ဖြည့်စွက်စာအနည်းငယ်ကိုသောက်သင့်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်လိုအပ်သော resveratrol သောက်သုံးမှုအားသဘာဝရင်းမြစ်များဖြစ်သောစပျစ်သီးအသားအရေနှင့်စပျစ်သီးဖျော်ရည်တို့မှရယူသင့်သည်။ ဒီအုပ်စုကဝိုင်ကိုမသောက်သင့်ဘူး။
သွေးခဲသောရောဂါများခံစားနေရသောလူများသည်သွေးခဲခြင်းကိုနှေးစေသည့်အတွက် resveratrol နှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်။ အလားတူပင်၊ သားအိမ်၊ သားအိမ် (သို့) ရင်သားကင်ဆာစသည့်ဟော်မုန်းများအထိခိုက်မခံသောအခြေအနေများခံစားနေရသောလူများသည်လည်း resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးများမှရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သည်။
Malbec စပျစ်သီးတွင်စပျစ်ရည်အမျိုးမျိုး၏အထူဆုံးအရေခွံအချို့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်နှလုံးသွေးကြောနှင့်ကိုယ်ခံအားကျန်းမာရေးအတွက်သော့များဖြစ်သော resveratrol antioxidants များပါရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် resveratrol သည် endothelial vasodilator လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပြုမူသည်ကိုပြသပြီး၎င်းသည်အခြားသူများအားစပျစ်ဝိုင်နီတွင် resveratrol သည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Resveratrol သည်တိုတောင်းသောဆေးများ (၁.၀ ဂရမ်) တွင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်ဟုမထင်ရ။ သို့မဟုတ်ပါကတစ်နေ့လျှင် 1.0 g ထက်ပိုသောဆေးများသောက်သုံးပါကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ အရက်မပါသောအသည်းအသည်းရောဂါရှိသည့်လူနာများတွင်ပျို့ချင်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊
resveratrol ၏ကြီးထွားလာလူကြိုက်များဒီထုတ်ကုန်၏အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ Resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေပြီးအသားအရေကောင်းမွန်စေသည်။ Resveratrol ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုလေ့ကျင့်ခန်းမပြုလုပ်မီသောက်သုံးပါကပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ဆက်နွယ်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းရရှိစေသည်။ Resveratrol သည်သွေးဂလူးကို့စ်ကိုလျော့ကျစေပြီးသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေကြောင်းသုတေသနကသက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် triglycerides များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးပွားစေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်ကင်ဆာဆဲ (လ်) များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးနာတာရှည်အဆစ်နှင့်အဆစ်ဆေးရည်ကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်သည့်ဆေးဖြစ်သည်။
Resveratrol သည် ဆဲလ်ယဉ်ကျေးမှုစနစ်များတွင် ER-positive နှင့် negative ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်များ ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးပေးကြောင်း ပြသထားသည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်အမျိုးအစားများ၊ အီစထရိုဂျင် receptor isoform နှင့် endogenous estrogen ပါဝင်မှုအပေါ် မူတည်၍ အီစထရိုဂျင် agonist သို့မဟုတ် antagonist အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်။
အရောင်ဖျော့သောအရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ဖြစ်သော Pee ။
သင်၏လက်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်များ၊ ခြေထောက်များ၊ ခြေဆစ်များ၊ သင်၏မျက်လုံးများ၊ မျက်နှာများ၊
ဤရွေ့ကားဒေတာညွှန်ပြ resveratrol ပုံမှန်သိုင်းရွိုက်ဆဲလ်ထဲမှာ NIS ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့် function ကိုတစ်ခုတားစီးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင် resveratrol သည်သိုင်းရွိုက်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အခန်းကဏ္haveတွင်ရှိပုံရသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် resveratrol အမြောက်အများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်သတိထားရန်အကြံပြုသည်။
ဝိုင်နီသည်အစားအစာအတွက် resveratrol အမြင့်ဆုံးရရှိသည်။ ၎င်းသည်စပျစ်ဝိုင်အချဉ်ပေါက်ရာတွင် ၀ ိုင်နီများပြုလုပ်ရန်အချိန်ဖြုန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စပျစ်ဝိုင်နီတွင် Resveratrol ၏တည်ရှိမှုသည်၎င်းကိုနှလုံးကျန်းမာစေသည်ဟုသင်ကြားသိရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများက resveratrol ကြွယ်ဝသောစပျစ်သီး၊ ဘလက်ဘယ်ရီ၊ Raspberry, စတော်ဘယ်ရီနှင့်ပန်းသီးများကအဆီပိုလျှံစွာလောင်ကျွမ်းကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်နည်းဗျူဟာအသစ်သည် resveratrol အသီးများစွာတွင်တွေ့ရသော antioxidant တွင်တည်ရှိသည်။
လူများသည် resveratrol ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှ resveratrol ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဝယ်လိုအားသည်စျေးကွက်တွင်အလွန်များပြားလာသည်။ ဤအချက်ကစျေးကွက်တွင်အခွင့်အလမ်းများရယူရန်အရည်အသွေးမြင့်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်လျှင် resveratrol ဖြည့်စွက်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားပါက၊ သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော resveratrol အမှုန့်များရရှိရန်သေချာစေရမည်။ အရည်အသွေးကောင်းသည့်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်းသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအောင်မြင်မှုအတွက်သေချာစေရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
သင်နေရာတစ်ခုရှာနေလျှင် resveratrol အမှုန့်ကိုဝယ်ကြလော့ အမြောက်အများအနေဖြင့်ကုန်ကြမ်းများရှာဖွေခြင်းအတွက်သင်မျက်စိကန်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Cofttek ဖြစ်သည်။ ခိုင်မာသည့်သုတေသနအဖွဲ့နှင့်အထူးအရောင်းဌာနမှကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုမ္ပဏီများအားအချိန်တိုအတွင်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များနှင့်မိတ်ဖက်များရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော resveratrol သည် ၂၅ ကီလိုဂရမ်ကြီးမားသောသုတ်ဆေးများဖြင့်ရရှိပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှရရှိသည်။ ၎င်းမှထုတ်လုပ်သောဖြည့်စွက်အရည်အသွေးနှင့်ထိရောက်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ resveratrol အမြောက်အများကိုသင်ဝယ်လိုပါက cofttek.com ကို ၀ ယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။
(1) Sonia L. Ramírez-Garza၊ Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, ကာရိုလိုင်းနားအီး Storniolo, အန်နာ Tresserra-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt နှင့် Rosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - လူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုစမ်းသပ်မှုမှရလဒ်များအာဟာရ ၁၀။ (၁၂)
(2) Manisha Nigam၊ Bilge Sener၊ Mehtap Kilic၊ Mehdi Sharifi-Rad၊ ပက်ထရစ် Valere Tsouh Fokou၊ Natália Martins နှင့် Javad Sharifi-Rad (2018) Resveratrol - ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသောနှစ်ဖက်ဓား။6(3) ။
(3) Adi Y. Berman, ရာခေလအေ Motechin, Maia Y. Wiesenfeld & Marina K. Holz (2017) resveratrol ၏ကုထုံးအလားအလာ: လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေတစ်ပြန်လည်သုံးသပ်, npj Precision Oncology volume 1၊ အပိုငျးအရေအတွက် - 35 edn ။
(4) Resveratrol (၅၀၁-၃၆-၀)
(5) egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(6) Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်။
(7) Anandamide vs cbd: ဘယ်ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့ကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
(9) မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ: အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
(10) Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(11) phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(12) pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(13) alpha gpc ၏အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်။
(14) Nikotinamide mononucleotide (nmn) ၏အိုမင်းခြင်းကိုခံသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်။